ဗဟုသုတ – ရွှေပြည်သစ် မီဒီယာ
တချိန်က အရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် (သို့) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြောင်း
Posted on February 3, 2019 by moezaw
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော တက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှ၏ အစောဆုံး တက္ကသိုလ်များတွင်လည်း ပါဝင်သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ် အင်းယားကန်၏ အနောက်တောင်ဘက်၊ ပြည်လမ်း နှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတို့ ဆုံရာတွင် တည်ရှိသည်။ ပင်မတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်း နှင့် လှိုင်ကျောင်းဝန်း ဟူ၍ ၂ မျိုးရှိပြီး၊ ဂျပ်ဆင် ဘုရားကျောင်းမှာ ပင်မ ကျောင်းဝန်း အတွင်းတွင် ရှိသည်။ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အနီးတွင်ရှိသော အထင်ကရ သစ်ပုတ်ပင်ကြီးသည် Continue reading “တချိန်က အရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် (သို့) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြောင်း”
Posted in ဗဟုသုတ, သမိုင်းLeaveaComment on တချိန်က အရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် (သို့) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြောင်း
Continue reading “သက္ကရာဇ်များ အကြောင်း”
Posted in ဗဟုသုတ, သမိုင်းLeaveaComment on သက္ကရာဇ်များ အကြောင်း
“ဗမာလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း”
Posted on February 2, 2019 by moezaw
ဗမာလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း
တိဘက်တို ဘားမန်းလူမျိုးနွယ်စုကြီး မှာ အကြီးဆုံးသော လူမျိုးဖြစ်သည်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ နာဂ၊ သက်၊ ကမ်းယံ၊ ပျူ တို့ နောက်မှ ဝင်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ပျူတို့ ထူထောင်သည့် ပထမပြည်ထောင်စုကို အေဒီ ၈ ရာစုတွင် နန်ကျောက်တို့က ဖျက်စီးပြီးချိန် မတိုင်မှီကပင် ရောက်ရှိနေထိုင် နေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်း၍ရနိုင်သည်။
အေဒီ ၁၀ ရာစုမတိုင်မှီ အချိန်ကပင် ကျောက်ဆည် ၁၁ ခရိုင်တွင် အခြေချခဲ့ပြီး နောက်များမကြာမှီ တွင်မြစ်သာ ၆ ခရိုင် ၊ ပုဂံနေပြည်တော်တို့ကို ထူထောင်ကာ ဒုတိယမြန်မာပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့က ထိုပြည်ထောင်စုကိုသာ ပထမပြည်ထောင်စုအဖြစ် လက်ခံကြသည်။
သမိုင်းတစ်လျောက်တွင် မွန်ဂို၊ တရုတ်၊ ယိုးဒယား၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ကရင် အစရှိသည့် အတွင်း၊ အပြင်ရန်အမျိုးမျိုးနှင့်ကြုံတွ့ခဲ့ဖူးပြီး အကြိမ်တိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စု၏ ဦးဆောင်သူနေရာကို ဗမာတို့ ပြန်လည်ကာ ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည်။
အနော်ရထာ၏ ပထမပြည်ထောင်စု (ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး)၊ တပင်ရွှေထီး-ဘုရင့်နောင်တို့ ၏ ဒုတိယပြည်ထောင်စု (ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး)၊ အလောင်းဘုရား၏ တတိယပြည်ထောင်စု (တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး) တို့ကို တည်ထောင်ကာ သမိုင်းတစ်လျောက်တွင် အောင်နိုင်သူများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။
ပထမ အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ စစ်ပွဲ (အင်္ဂလိပ်တို့၏မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပထမ ကျူးကျော်စစ်ပွဲ) အပြီးတွင် မဏိပူရ ၊ တနင်္သာရီနှင့် ရခိုင် ဒေသများကို အင်္ဂလိပ်တို့ထံ ပေးအပ်ခဲ့ရပြီး ၁၈၈၆ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗြိတိသျှ အင်ပါယာအတွင်းသို့ ကျရောက်ခဲ့သည်။၁၉၃၇ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသည် အိန္ဒိယ၏ ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့တွင်ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာပြည် အဖြစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။
နောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အဖြစ် ကူးပြောင်းကာ တစ်ပါတီ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။၂၆ နှစ်အကြာတွင် တစ်ပါတီစနစ် ပျက်သုဉ်းပြီး တပ်မတော်မှ နိုင်ငံ့အာဏာကို ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၁ဝ ခုနှစ်တွင် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ ၊ အာဆီယံ ၊ WTO စသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဗမာလူမျိုးတို့ ဆင်းသက်လာပုံ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မလာမီ နှစ်ပေါင်း ၄၀ဝဝကျော်ခန့် အချိန်က ဗမာလူမျိုး တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဖက်ရှိ ကန်စုဒေသ၊ ထောင်မြစ်ဝှမ်းတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
သက်သေ အထောက်အထားအားဖြင့် ဗမာတို့၏ ဘိုးဘွားများဖြစ်သည်ဟု ဆိုရန်ခက်သကဲ့သို့ ငြင်းပယ်နိုင်ခြင်းလည်း မရှိပေ။ တွေ့ရှိရသည့် ထိုလူမျိုးစုတို့၏ ကျန်ရစ်သော အသုံးအဆောင်များမှာ အတော်အတန် အဆင့်မြင့်သည့် ကျောက်ခေတ်နှောင်း လက်ရာမျိုးရှိပြီး ခေတ်ပြိုင်တရုတ်လက်ရာများနှင့် ရေချိန်ညီသော ယဉ်ကျေးမှုမျိုးရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
တရုတ်တို့၏ အင်အားကြီးမားစွာ နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်လာမှုများ၊ လူမျိုးစုအချင်းအချင်း တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အဆိုပါ လူမျိုးစုသည် တောင်ဖက်ဒေသများသို့ ရွေ့ပြောင်းလာကြသည်။ ထိုသို့ လွတ်လပ်မှုအတွက် ရွေ့ပြောင်းရာတွင် ပေးဆပ်ရသော တန်ဖိုးမှာ အနှစ် ၃၀ဝဝနီးပါးမျှ တိမ်ကောခဲ့ရသည့် ယဉ်ကျေးမှုပင် ဖြစ်တော့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ မိမိတို့လူမျိုးစု လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ယဉ်ကျေးမှုကို ပစ်ပယ်ကာ ရောက်ရာအရပ်မှ ယဉ်ကျေးမှုများ ရောနှောလာသည်ကို လက်ခံခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
တနည်းအား ဖြင့် ပုဂံတွင် အခြေချသည့် အေဒီ ၁၁ရာစုက ဗမာတို့ယဉ်ကျေးမှုသည် အေဒီ ၁၁ရာစု တရုတ်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ယဉ်လျှင် အဆင့်အတန်းချင်း များစွာကွာခြားခဲ့ပေပြီ။
သို့ဖြင့် ခရစ်၇ ရာစုများ အရောက်တွင် ထိုလူမျိုးစုသည် တရုတ်- မြန်မာနယ်စပ်သို့ ရောက်လာပြီဖြစ်ပြီး တရုတ်မှတ်တမ်းများတွင် မန်းမန် ဟုခေါ်သည့် လူမျိုးအုပ်စုကြီး အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။
ထိုအုပ်စုကြီးအတွင်းမှ မန်ဟုခေါ်သည့် လူမျိုးစုမှ မိမိတို့အကြီးအကဲဖြစ်သူကို မင်း၊ မင်းစော ဟုခေါ်ကြပြီး စစ်မက်ရေးရာကျွမ်းကျင် သူများဖြစ်လာသည်။
သို့သော် မွေးမြူရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုစဉ်ကပင် အိမ်ကြက်ကို မွေးမြူနေပြီဖြစ်သည်ဟု သိရှိ ရသည်။
ထိုလူမျိုးသည် ထကြွလုံ့လရှိပြီး စစ်ရေးတွင် အလွန် အားသန်သူများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ စစ်ပွဲများတွင် လှံနှင့် မြင်းစီးကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးချကာ တိုက်ခိုက်သည်။ အမျိုးသားများသာမက အမျိုးသမီးများပါ မြင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ စီးနှင်းနိုင်သည်။
လေးမြားအတတ်တွင် ကျင်လည်ကာ အဆိပ်လူးမြားဖြင့်လည်း ရန်သူကို တိုက်ခိုက်လေ့ရှိသည်။ ခြေတံရှည်အိမ်များ တည်ဆောက် နေထိုင်သည်။ ဘောင်းဘီဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး ခေါင်းပေါင်းအနီကို ပေါင်းလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
၈ရာစု အစောပိုင်းကာလများတွင် နန်ကျောက်တို့၏ အုပ်စီးမှုကို ခံလာရပြီး ခရစ်နှစ် ၇၉၄ ခန့်တွင် နန်ကျောက်လက်အောက်ခံ ဖြစ်ရသည်။
စစ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် နန်ကျောက်တို့၏ အရှေ့တောင်အာရှ ကုန်းမြေအား ကျူးကျော်စစ်ပွဲများတွင် တပ်ဦးမှ အများဆုံး ပါဝင်ရလေ့ရှိသည်။
မန်းမန်စစ်သည်များသည် အလွန်တရာ သတ္တိရှိပြီး သစ္စာလည်းမြဲသည်ဟု ဆိုလေ့ရှိသည်။ စစ်ပွဲတွင် မန်းမန်စစ်သည်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ၍ မည်သို့ပင်ရိုက် နှက်စစ်ဆေးစေကာမူ မည်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမှ ပြော ပြမည် မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။
စစ်တိုက်သန်သူများ ဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့ကို အုပ်စီး ထားသည့် နန်ကျောက်များ ခိုင်းသကဲ့သို့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ လှည့်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့် တစ်ကြောင်း၊
နဂိုကပင် လွတ်လပ်မှုကို အလေးထားသည့် လူမျိုးဖြစ်သည်ကြောင့် တစ်ကြောင်း ခရစ်နှစ် ၉ ရာစု မတိုင်မီကပင် နန်ကျောက်အုပ်ချုပ်သည့် ပြည်နယ်အတွင်းမှ အုပ်စုလိုက် စတင် ထွက်ခွာလာကြသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတခွင် နေရာဒေသ အတော်များများကို ရောက်ဖူးပြီးဖြစ်သဖြင့် မိမိတို့နှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည့် ဒေသကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် ပူပြင်းစိုစွတ်ပြီး ငှက်ဖျားရောဂါကဲ့သို့ ရောဂါဆိုးမျိုးရှိရာ ဒေသများကို ရှောင်ရှားကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗဟိုဒေသ၊ ပူအိုက်ခြောက်သွေ့ကာ ရောဂါဘယ ဘေးကင်းရှင်းသည့် ဒေသကို ရွေးချယ်အခြေ ချလေတော့သည်။
မြန်မာ့မြေပထဝီ အနေအထားကို သိရှိပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ မိမိတို့အား ခုခံသူမရှိမည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည့် သံလွင်မြစ်ကို စုန်ဆင်းကာ မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကို ဖြတ်သန်းကာ ဗဟိုမြန်မာဒေသကို အရှေ့တောင်ထောင့်မှ ဝင်ရောက် သည်။
ထို့နောက် စိုက်ပျိုးမြေကောင်းမွန်သည့် ကျောက်ဆည် နှင့် မင်းဘူးဒေသများကို အရင်ရောက်နှင့်သော မွန်၊ သက် ၊ ပလောင် နှင့် ပျူတို့ထံမှ လုယူသည်။ (လုယူသည်ဟု ဆိုရာတွင် တစ်ပြိုင်နက် စစ်ပြု၍ ယူသည်မျိုး ရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ လူဦး ရေအတိုးအပွားပေါ်တွင် အခြေပြုကာ ဝါးမြိုခြင်းလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။)
ထို့နောက် ဆက်သွယ်ရေး၊ ရိက္ခာရရှိနိုင်မှုနှင့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သုံးသပ်ကာ မြို့တော်အဖြစ် အလယ်ဗဟိုတွင် ရှိသည့် ပုဂံကို ထူထောင်သည်။
ထိုနောက် မိမိ အရင် လူမျိုးများဖြစ်သည့် ပျူ နင့် မွန်တို့ထံမှ ဘာသာစကား၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို လက်ခံ သုံးစွဲလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် အောင်နိုင်သူများသည် ယဉ်ကျေးမှုဖြင့် ကျဆုံးပြီဟု ဆိုရလောက်အောင်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
ပလောင်နှင့် မွန်လူမျိုးများထံမှ ဆည်ရေသောက် လယ်ယာမြေ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကို ရယူကာ စိုက်ပျိုးရေးကို အကြီး အကျယ်တိုးချဲ့သည်။ တောများကို ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းကာ စိုက်ပျိုးမြေအဖြစ် ဖေါ်ထုတ်သည်။
သို့ဖြင့် ရွှေဘို၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ၊ စစ်ကိုင်း နှင့် မန္တလးအစရှိသည့် ဒေသများတွင် လယ်စိုက်ပျိုးကြပြီး အခြားမြေဩဇာ ညံ့ဖျင်းသည့်အရပ် များတွင် ကွမ်း၊ထန်း အစရှိသည့် ဥယျာဉ်ခြံများကို လုပ်ကိုင် ကြသည်။
အလွန်မှ ညံ့ဖျင်းသည့် မြေများတွင် ပြောင်း၊ နှမ်း အစရှိသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးသည်။ ဤသို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလယ်ပိုင်း ခြောက်သွေ့ဒေသကြီး တစ်ခုလုံးအား စိုက်ပျိုးမြေအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ ဗမာတို့အတွက် အလွန်ပင် ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်သည့် ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုပင်ဖြစ်သည်။စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းကာ အခြေတကျနေထိုင်ခွင့် ရရှိလာပြီ ဖြစ်သဖြင့် လူဦးရေမှာလည်း အလျင်အမြန်ပင် တိုးပွားလာပြီး နယ်ပယ်မှာလည်း ကျယ်ပြန့်လာသည်။
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံ ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းလွင်ပြင်ဒေသ များတွင် အစဉ်အဆက် နေထိုင်ကြသည်။ AD ၁၀ ရာစု ခန့်စ၍ ဧရာဝတီ မြစ်ရိုးတစ်လျှောက်တွင် မြို့ပြများ ထူထောင် နေထိုင်ကြသည်။
ပုဂံ၊ အင်းဝ၊ အမရပူရ၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးတို့မှာ ထင်ရှားသည်။ ယနေ့အချိန်များတွင် ဗမာလူမျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံစုစုပေါင်း လူဦးရေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိသည်။
ဗမာအမျိုးသမီးများသည် ရင်စေ့ ရှပ်အင်္ကျီကို ဝတ်ဆင်ပြီး ပိုးချည်ဖောက်ထားသော ကွင်းလုံချည်ကို ဝတ်ဆင်၍ ပခုံးတွင်ပုဝါလွှား ရင်တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ချထားသည်။ ဗမာအမျိုးသမီးများသည် ဆံပင်ကို အထူးဆင်ယင် ထုံးဖွဲ့လေ့ရှိသည်။ အမျိုးသားများ မှာ ဦးခေါင်းတွင် ခေါင်းပေါင်း ပေါင်း၍ တိုက်ပုံရင်စေ့ နှင့် ပုဆိုးကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။
ဘာသာ အယူဝါဒအားဖြင့် အစပထမတွင် မဟာယာနဂိုဏ်း၊ ရိုးရာနတ်နှင့် ဟိန္ဒူနတ်တို့ကို ကိုးကွယ်သည်ဟု လေ့လာသိရှိရပါသည်။ အနော်ရထာမင်း လက်ထက်တွင် ထိုအယူကွဲဂိုဏ်းများကို နှိပ်ကွပ်ပြီး စစ်မှန်သည့် ထေရဝါဒ (မဟာယာနဂိုဏ်းက ဟိနယာနဟု ခေါ်သည်။) ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ရန် ပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည်။
သို့သော် သမိုင်းတစ်လျောက်တွင် မဟာယာန နွယ်သော ပွဲကျောင်း အလေ့အထများ၊ ရိုးရာနတ်နှင့် ဟိန္ဒူဆိုင်ရာ အလေ့အထများကို ညောင်ရမ်းခေတ်အထိ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
သက်သေအားဖြင့် ကျန်စစ်သားမင်း နန်းသစ် တည်ပြီး နန်းသိမ်းပွဲခံရာတွင် ဟိန္ဒူနတ်ဖြစ်သည့် ဗိဿနိုးနတ်များကို ပသခြင်း တောင်ငူနန်းဆက်တွင်လည်း တောင်တွင်းရှင်မုန်ယိုဆရာတော်၊ ညောင်ရမ်းမင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးမင်းဆက်များတွင် ဗားမဲ့၊ ဗားမော့ အစရှိသည့် မွန်ဆရာတော်များကို ပင့်ဖိတ်ကာ နတ်မေးစေခြင်း အစရှိသည်တို့ကို တွေ့ရသည်။
ယနေ့ မြန်မာစာပေ အရေးအသားမှာ ဗမာစာကို စံထားပြီး ရုံးသုံးစာအဖြစ်၊ မြန်မာစာအဖြစ် သတ်မှတ်သည် ဟုဆိုနိုင်သည်။ စာပေ အရေးအသားတွင် ဗမာတို့သည် အနွယ်တူသော ပျူတို့ထံမှ မသင်ယူခဲ့ပဲ ၊ မွန်တို့ကို ဆရာတင်ခဲ့ပြီး အက္ခရာ အရေးအသားမှာလည်း မွန်တို့ထံမှ ရယူသည်။
ထို့ကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ပျူကျောက်စာ အကြွင်းအကျန်များကို ဖတ်ရှုအဓိပ္ပာယ် ဖော်နိုင်ရန် ခက်ခဲနေရသည်။ ဗမာတို့သည် ခရစ်နှစ် ၁၁၁၃ မှ ၁၁၇၄ အတွင်း၌ မွန်ယဉ်ကျေးမှုကို မှီငြမ်းပြု၍ သီးခြား ယဉ်ကျေးမှု တည်ထောင်ရန်အားထုတ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ ခေတ်ဟောင်းမြန်မာ့ရာဇဝင်စာ-၂၅၌ တွေ့ရသည်။
ဗမာ့သမိုင်းဆရာတို့ကမူ ဗမာစာသည် ပျူစာမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ပျူစာမှ ဆင်းသက်ရိုးမှန်လျှင် ပျူ စာမှသည် ဗမာစာဖြစ်လာစေရန် ခေတ်အဆက်ဆက် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲလာခဲ့သော ကြားခံ စာပေမျိုး ရှိရမည်။ ယင်းကဲ့သို့ မရှိခဲ့ကြောင်းကို ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာက သက်သေခံလျှက်ရှိသည်။
ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ၌ ပါဠိ၊ ဗမာ၊ ပျူ၊ မွန် ဟူ၍ စာပေလေးမျိုးဖြင့် တပြိုင်တည်း ရေးထိုးထားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်းကျောက်စာမှာအကြောင်းအရာ တစ်ခုတည်းကို စာပေလေးမျိုးဖြင့် တစ်ခေတ်တည်းတွင် ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ဗမာစာသည် ပျူစာမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟူသော အဆိုမှာ ခိုင်လုံသောအထောက် အထားမဟုတ်ချေ။
အလားတူစွာ မွန်စာမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ဆိုပြန်ရန်လည်း ယင်းကျောက်စာမှာပင် မွန်စာလည်း ပါရှိနေပြီး ဖြစ်သောကြောင်းတည်း။ ယနေ့ထိ ပျူကျောက်စာကို ကောင်းစွာ ရေရေလည်လည် ဖတ်တတ်သူ ဟူ၍ မရှိသေးချေ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပျူတို့သည် ရခိုင်နှင့် မွန်တို့ကဲ့သို့ သီးခြားစာပေဖြင့် ရပ်တည်နေထိုင်လာခဲ့သော လူမျိုးများဖြစ်နေသောကြောင့်တည်း။
ဒေါက်တာသန်းထွန်းက သူ၏ခေတ်ဟောင်း မြန်မာ့ရာဇဝင် စာ-၁၂၂ တွင် ထိုလေးရာစုတွင် စာရေးနည်းပညာကို ပျူတို့ ရကြလျှက် မွန်နှင့် ရခိုင်တို့က ၆ ရာစုတွင် ရနေပြီးဖြစ်လျှက် နောင်အခါ ဗမာတို့က ပျူ၊ မွန် နှစ်ဦးစလုံးထံမှ နည်းကို မှီလျှက် ၁၁ ရာစုတွင် ထိုပညာကို ရကြသည်ဟု မှတ်ယူနိုင် သည်ဟူ၍ ကောက်ချက်ချ ရေးသားခဲ့ပါသည်။
တဖန် ပုဂံခေတ်၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ် ကျောက်စာများကို သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်ပါက “ရခိုင်သံဖြင့် ရေးသားထားသော ရခိုင်စာပေ အသုံးအနူန်းများကိုသာ ” တွေ့ရှိကြရပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗမာတို့သည် ဗမာစာကို ပျူနှင့် မွန်တို့ထံမှ ရသည်ဟူသော အဆိုကို စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာသည် . ။
ရခိုင့်အသံ နှင့် ပုဂံခေတ် ဗမာကျောက်စာကို နှိင်းယှဉ်ခြင်း
ရဟန်းသင်္ဃာ = ရဟန်းသံဃာ
မင်းဆြာ = မင်းဆရာ
ပင့်သကူ = ပံသကူ
လှိယ် = လှေ
အရှေ့လားသော် = အရှေ့သွားသော်
ဗမာစာပေ တိုးတက်လာသော ပထမ အင်းဝခေတ် ကာလမှာလည်း မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ကို ရှမ်းတို့ ကြီးစိုးထားချိန် ဖြစ်သဖြင့် ဗမာစာတိုးတက်လာခြင်းသည် ရှမ်းတို့ရဲ့ ကျေးဇူးလည်း ပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့် ဗမာစာသည် ဗမာလူမျိူးတို့ရဲ့ စာပေဟု ဆိုခြင်းထက် မြန်မာပြည်ထောင်စုသား အားလုံးတို့ရဲ့အများပိုင် ဘုံ စာပေ အရေးအသား ဟု ဆိုရပေမည်။
ဗမာလူမြိုး ပျေါပေါကျလာပုံ သမိုငျးကွောငျး
တိဘကျတို ဘားမနျးလူမြိုးနှယျစုကွီး မှာ အကွီးဆုံးသော လူမြိုးဖွဈသညျ။ ယနေ့ မွနျမာနိုငျငံ နယျနိမိတျအတှငျးသို့ နာဂ၊ သကျ၊ ကမျးယံ၊ ပြူ တို့ နောကျမှ ဝငျရောကျလာခွငျး ဖွဈသျောလညျး ပြူတို့ ထူထောငျသညျ့ ပထမပွညျထောငျစုကို အဒေီ ၈ ရာစုတှငျ နနျကြောကျတို့က ဖကျြစီးပွီးခြိနျ မတိုငျမှီကပငျ ရောကျရှိနထေိုငျ နခေဲ့ပွီးဖွဈသညျဟု ခနျ့မှနျး၍ရနိုငျသညျ။
အဒေီ ၁၀ ရာစုမတိုငျမှီ အခြိနျကပငျ ကြောကျဆညျ ၁၁ ခရိုငျတှငျ အခွခေခြဲ့ပွီး နောကျမြားမကွာမှီ တှငျမွဈသာ ၆ ခရိုငျ ၊ ပုဂံနပွေညျတျောတို့ကို ထူထောငျကာ ဒုတိယမွနျမာပွညျထောငျစုကို တညျထောငျခဲ့ကွသညျ။ သို့သျော မွနျမာနိုငျငံသားတို့က ထိုပွညျထောငျစုကိုသာ ပထမပွညျထောငျစုအဖွဈ လကျခံကွသညျ။
သမိုငျးတဈလြောကျတှငျ မှနျဂို၊ တရုတျ၊ ယိုးဒယား၊ မှနျ၊ ရခိုငျ၊ ရှမျး၊ ကရငျ အစရှိသညျ့ အတှငျး၊ အပွငျရနျအမြိုးမြိုးနှငျ့ကွုံတှ့ခဲ့ဖူးပွီး အကွိမျတိုငျးတှငျ ပွညျထောငျစု၏ ဦးဆောငျသူနရောကို ဗမာတို့ ပွနျလညျကာ ရောကျရှိနိုငျခဲ့သညျ။
အနျောရထာ၏ ပထမပွညျထောငျစု (ပထမမွနျမာနိုငျငံတျောကွီး)၊ တပငျရှထေီး-ဘုရငျ့နောငျတို့ ၏ ဒုတိယပွညျထောငျစု (ဒုတိယမွနျမာနိုငျငံတျောကွီး)၊ အလောငျးဘုရား၏ တတိယပွညျထောငျစု (တတိယမွနျမာနိုငျငံတျောကွီး) တို့ကို တညျထောငျကာ သမိုငျးတဈလြောကျတှငျ အောငျနိုငျသူမြားအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့သညျ။
ပထမ အင်ျဂလိပျ – မွနျမာ စဈပှဲ (အင်ျဂလိပျတို့၏မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ပထမ ကြူးကြျောစဈပှဲ) အပွီးတှငျ မဏိပူရ ၊ တနင်ျသာရီနှငျ့ ရခိုငျ ဒသေမြားကို အင်ျဂလိပျတို့ထံ ပေးအပျခဲ့ရပွီး ၁၈၈၆ တှငျ မွနျမာနိုငျငံသညျ ဗွိတိသြှ အငျပါယာအတှငျးသို့ ကရြောကျခဲ့သညျ။၁၉၃၇ ခုနှဈအထိ မွနျမာနိုငျငံသညျ အိန်ဒိယ၏ ပွညျနယျတဈခုအဖွဈ တညျရှိခဲ့ပွီးနောကျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး၏ ဦးဆောငျကွိုးပမျးမှုကွောငျ့ ၁၉၄၈ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ (၄) ရကျနတှေ့ငျဗွိတိသြှ အုပျခြုပျမှု အောကျမှ လှတျလပျရေး ရရှိခဲ့ပွီး မွနျမာပွညျ အဖွဈပွနျလညျထူထောငျခဲ့သညျ။
နောကျ ၁၉၆၂ ခုနှဈတှငျ ပွညျထောငျစုဆိုရှယျလဈသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော အဖွဈ ကူးပွောငျးကာ တဈပါတီ ဗဟိုဦးစီးစနဈဖွငျ့ အုပျခြုပျခဲ့သညျ။၂၆ နှဈအကွာတှငျ တဈပါတီစနဈ ပကျြသုဉျးပွီး တပျမတျောမှ နိုငျငံ့အာဏာကို ထိနျးသိမျးခဲ့သညျ။ ၂၀၁ဝ ခုနှဈတှငျ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီစနဈသို့ ကူးပွောငျးခဲ့သညျ။
ကုလသမဂ်ဂ ၊ အာဆီယံ ၊ WTO စသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားတှငျ ပါဝငျခဲ့သညျ။ ဗမာလူမြိုးတို့ ဆငျးသကျလာပုံ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးသို့ ဝငျရောကျမလာမီ နှဈပေါငျး ၄၀ဝဝကြျောခနျ့ အခြိနျက ဗမာလူမြိုး တို့သညျ တရုတျနိုငျငံ အနောကျမွောကျဖကျရှိ ကနျစုဒသေ၊ ထောငျမွဈဝှမျးတှငျ နထေိုငျခဲ့ကွသညျဟု ခနျ့မှနျးရသညျ။
သကျသေ အထောကျအထားအားဖွငျ့ ဗမာတို့၏ ဘိုးဘှားမြားဖွဈသညျဟု ဆိုရနျခကျသကဲ့သို့ ငွငျးပယျနိုငျခွငျးလညျး မရှိပေ။ တှရှေိ့ရသညျ့ ထိုလူမြိုးစုတို့၏ ကနျြရဈသော အသုံးအဆောငျမြားမှာ အတျောအတနျ အဆငျ့မွငျ့သညျ့ ကြောကျခတျေနှောငျး လကျရာမြိုးရှိပွီး ခတျေပွိုငျတရုတျလကျရာမြားနှငျ့ ရခြေိနျညီသော ယဉျကြေးမှုမြိုးရှိသညျဟု ဆိုနိုငျသညျ။
တရုတျတို့၏ အငျအားကွီးမားစှာ နယျပယျခြဲ့ထှငျလာမှုမြား၊ လူမြိုးစုအခငျြးအခငျြး တိုကျခိုကျမှုမြားကွောငျ့ အဆိုပါ လူမြိုးစုသညျ တောငျဖကျဒသေမြားသို့ ရှပွေ့ောငျးလာကွသညျ။ ထိုသို့ လှတျလပျမှုအတှကျ ရှပွေ့ောငျးရာတှငျ ပေးဆပျရသော တနျဖိုးမှာ အနှဈ ၃၀ဝဝနီးပါးမြှ တိမျကောခဲ့ရသညျ့ ယဉျကြေးမှုပငျ ဖွဈတော့သညျ။
ဆိုလိုသညျမှာ မိမိတို့လူမြိုးစု လှတျမွောကျရေးအတှကျ ယဉျကြေးမှုကို ပဈပယျကာ ရောကျရာအရပျမှ ယဉျကြေးမှုမြား ရောနှောလာသညျကို လကျခံခဲ့ရခွငျးပငျဖွဈသညျ။
တနညျးအား ဖွငျ့ ပုဂံတှငျ အခွခေသြညျ့ အဒေီ ၁၁ရာစုက ဗမာတို့ယဉျကြေးမှုသညျ အဒေီ ၁၁ရာစု တရုတျတို့၏ ယဉျကြေးမှု နှငျ့ ယဉျလြှငျ အဆငျ့အတနျးခငျြး မြားစှာကှာခွားခဲ့ပပွေီ။
သို့ဖွငျ့ ခရဈ၇ ရာစုမြား အရောကျတှငျ ထိုလူမြိုးစုသညျ တရုတျ- မွနျမာနယျစပျသို့ ရောကျလာပွီဖွဈပွီး တရုတျမှတျတမျးမြားတှငျ မနျးမနျ ဟုချေါသညျ့ လူမြိုးအုပျစုကွီး အဖွဈ တညျရှိခဲ့သညျ။
ထိုအုပျစုကွီးအတှငျးမှ မနျဟုချေါသညျ့ လူမြိုးစုမှ မိမိတို့အကွီးအကဲဖွဈသူကို မငျး၊ မငျးစော ဟုချေါကွပွီး စဈမကျရေးရာကြှမျးကငျြ သူမြားဖွဈလာသညျ။
သို့သျော မှေးမွူရေးနှငျ့ စိုကျပြိုးရေး လုပျငနျးမြားကိုလညျး ဆောငျရှကျကွကွောငျး သိရှိရသညျ။ ထိုစဉျကပငျ အိမျကွကျကို မှေးမွူနပွေီဖွဈသညျဟု သိရှိ ရသညျ။
ထိုလူမြိုးသညျ ထကွှလုံ့လရှိပွီး စဈရေးတှငျ အလှနျ အားသနျသူမြား ဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။ စဈပှဲမြားတှငျ လှံနှငျ့ မွငျးစီးကြှမျးကငျြမှုကို အသုံးခကြာ တိုကျခိုကျသညျ။ အမြိုးသားမြားသာမက အမြိုးသမီးမြားပါ မွငျးကို ကြှမျးကငျြစှာ စီးနှငျးနိုငျသညျ။
လေးမွားအတတျတှငျ ကငျြလညျကာ အဆိပျလူးမွားဖွငျ့လညျး ရနျသူကို တိုကျခိုကျလရှေိ့သညျ။ ခွတေံရှညျအိမျမြား တညျဆောကျ နထေိုငျသညျ။ ဘောငျးဘီဝတျဆငျလရှေိ့ပွီး ခေါငျးပေါငျးအနီကို ပေါငျးလရှေိ့ကွောငျး သိရသညျ။
၈ရာစု အစောပိုငျးကာလမြားတှငျ နနျကြောကျတို့၏ အုပျစီးမှုကို ခံလာရပွီး ခရဈနှဈ ၇၉၄ ခနျ့တှငျ နနျကြောကျလကျအောကျခံ ဖွဈရသညျ။
စဈရေးကြှမျးကငျြမှုကွောငျ့ နနျကြောကျတို့၏ အရှတေ့ောငျအာရှ ကုနျးမွအေား ကြူးကြျောစဈပှဲမြားတှငျ တပျဦးမှ အမြားဆုံး ပါဝငျရလရှေိ့သညျ။
မနျးမနျစဈသညျမြားသညျ အလှနျတရာ သတ်တိရှိပွီး သစ်စာလညျးမွဲသညျဟု ဆိုလရှေိ့သညျ။ စဈပှဲတှငျ မနျးမနျစဈသညျတဈဦးအား ဖမျးဆီးရမိ၍ မညျသို့ပငျရိုကျ နှကျစဈဆေးစကောမူ မညျသညျ့လြှို့ဝှကျခကျြကိုမှ ပွော ပွမညျ မဟုတျဟု ဆိုသညျ။
စဈတိုကျသနျသူမြား ဖွဈသျောလညျး မိမိတို့ကို အုပျစီး ထားသညျ့ နနျကြောကျမြား ခိုငျးသကဲ့သို့ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ လှညျ့လညျတိုကျခိုကျခွငျးမှာ မဖွဈနိုငျသညျကွောငျ့ တဈကွောငျး၊
နဂိုကပငျ လှတျလပျမှုကို အလေးထားသညျ့ လူမြိုးဖွဈသညျကွောငျ့ တဈကွောငျး ခရဈနှဈ ၉ ရာစု မတိုငျမီကပငျ နနျကြောကျအုပျခြုပျသညျ့ ပွညျနယျအတှငျးမှ အုပျစုလိုကျ စတငျ ထှကျခှာလာကွသညျ။
အရှတေ့ောငျအာရှတခှငျ နရောဒသေ အတျောမြားမြားကို ရောကျဖူးပွီးဖွဈသဖွငျ့ မိမိတို့နှငျ့ အသငျ့တျောဆုံးဖွဈမညျ့ ဒသေကို ရှေးခယျြနိုငျပွီဖွဈသညျ။ သို့ဖွငျ့ ပူပွငျးစိုစှတျပွီး ငှကျဖြားရောဂါကဲ့သို့ ရောဂါဆိုးမြိုးရှိရာ ဒသေမြားကို ရှောငျရှားကာ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဗဟိုဒသေ၊ ပူအိုကျခွောကျသှကေ့ာ ရောဂါဘယ ဘေးကငျးရှငျးသညျ့ ဒသေကို ရှေးခယျြအခွေ ခလြတေော့သညျ။
မွနျမာ့မွပေထဝီ အနအေထားကို သိရှိပွီးဖွဈသကဲ့သို့ မိမိတို့အား ခုခံသူမရှိမညျ့ လမျးကွောငျးဖွဈသညျ့ သံလှငျမွဈကို စုနျဆငျးကာ မွောကျပိုငျးရှမျးပွညျနယျကို ဖွတျသနျးကာ ဗဟိုမွနျမာဒသေကို အရှတေ့ောငျထောငျ့မှ ဝငျရောကျ သညျ။
ထို့နောကျ စိုကျပြိုးမွကေောငျးမှနျသညျ့ ကြောကျဆညျ နှငျ့ မငျးဘူးဒသေမြားကို အရငျရောကျနှငျ့သော မှနျ၊ သကျ ၊ ပလောငျ နှငျ့ ပြူတို့ထံမှ လုယူသညျ။ (လုယူသညျဟု ဆိုရာတှငျ တဈပွိုငျနကျ စဈပွု၍ ယူသညျမြိုး ရှိနိုငျသကဲ့သို့၊ လူဦး ရအေတိုးအပှားပျေါတှငျ အခွပွေုကာ ဝါးမွိုခွငျးလညျး ရှိနိုငျပါသညျ။)
ထို့နောကျ ဆကျသှယျရေး၊ ရိက်ခာရရှိနိုငျမှုနှငျ့ အခွအေနေ အရပျရပျကို သုံးသပျကာ မွို့တျောအဖွဈ အလယျဗဟိုတှငျ ရှိသညျ့ ပုဂံကို ထူထောငျသညျ။
ထိုနောကျ မိမိ အရငျ လူမြိုးမြားဖွဈသညျ့ ပြူ နငျ့ မှနျတို့ထံမှ ဘာသာစကား၊ ဘာသာရေးနှငျ့ ယဉျကြေးမှုမြားကို လကျခံ သုံးစှဲလာကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အောငျနိုငျသူမြားသညျ ယဉျကြေးမှုဖွငျ့ ကဆြုံးပွီဟု ဆိုရလောကျအောငျပငျ ဖွဈတော့သညျ။
ပလောငျနှငျ့ မှနျလူမြိုးမြားထံမှ ဆညျရသေောကျ လယျယာမွေ စိုကျပြိုးနညျးစနဈကို ရယူကာ စိုကျပြိုးရေးကို အကွီး အကယျြတိုးခြဲ့သညျ။ တောမြားကို ခုတျထှငျ ရှငျးလငျးကာ စိုကျပြိုးမွအေဖွဈ ဖျေါထုတျသညျ။
သို့ဖွငျ့ ရှဘေို၊ မုံရှာ၊ ပခုက်ကူ၊ စဈကိုငျး နှငျ့ မန်တလးအစရှိသညျ့ ဒသေမြားတှငျ လယျစိုကျပြိုးကွပွီး အခွားမွဩေဇာ ညံ့ဖငျြးသညျ့အရပျ မြားတှငျ ကှမျး၊ထနျး အစရှိသညျ့ ဥယြာဉျခွံမြားကို လုပျကိုငျ ကွသညျ။
အလှနျမှ ညံ့ဖငျြးသညျ့ မွမြေားတှငျ ပွောငျး၊ နှမျး အစရှိသညျတို့ကို စိုကျပြိုးသညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အလယျပိုငျး ခွောကျသှဒေ့သေကွီး တဈခုလုံးအား စိုကျပြိုးမွအေဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျခဲ့ခွငျးမှာ ဗမာတို့အတှကျ အလှနျပငျ ဂုဏျယူဖှယျဖွဈသညျ့ ကွီးမားသော အောငျမွငျမှုပငျဖွဈသညျ။စိုကျပြိုးရေးဖွဈထှနျးကာ အခွတေကနြထေိုငျခှငျ့ ရရှိလာပွီ ဖွဈသဖွငျ့ လူဦးရမှောလညျး အလငျြအမွနျပငျ တိုးပှားလာပွီး နယျပယျမှာလညျး ကယျြပွနျ့လာသညျ။
ရိုးရာယဉျကြေးမှုနှငျ့ ဓလထေုံ့းစံ ၊ ဝတျစားဆငျယငျမှု
မွနျမာနိုငျငံ အထကျပိုငျးနှငျ့ အလယျပိုငျးလှငျပွငျဒသေ မြားတှငျ အစဉျအဆကျ နထေိုငျကွသညျ။ AD ၁၀ ရာစု ခနျ့စ၍ ဧရာဝတီ မွဈရိုးတဈလြှောကျတှငျ မွို့ပွမြား ထူထောငျ နထေိုငျကွသညျ။
ပုဂံ၊ အငျးဝ၊ အမရပူရ၊ စဈကိုငျး၊ မန်တလေးတို့မှာ ထငျရှားသညျ။ ယနအေ့ခြိနျမြားတှငျ ဗမာလူမြိုးမှာ မွနျမာနိုငျငံစုစုပေါငျး လူဦးရေ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျော ရှိသညျ။
ဗမာအမြိုးသမီးမြားသညျ ရငျစေ့ ရှပျအင်ျကြီကို ဝတျဆငျပွီး ပိုးခညျြဖောကျထားသော ကှငျးလုံခညျြကို ဝတျဆငျ၍ ပခုံးတှငျပုဝါလှား ရငျတဈဘကျတဈခကျြတှငျ ခထြားသညျ။ ဗမာအမြိုးသမီးမြားသညျ ဆံပငျကို အထူးဆငျယငျ ထုံးဖှဲ့လရှေိ့သညျ။ အမြိုးသားမြား မှာ ဦးခေါငျးတှငျ ခေါငျးပေါငျး ပေါငျး၍ တိုကျပုံရငျစေ့ နှငျ့ ပုဆိုးကို ဝတျဆငျကွသညျ။
ဘာသာ အယူဝါဒအားဖွငျ့ အစပထမတှငျ မဟာယာနဂိုဏျး၊ ရိုးရာနတျနှငျ့ ဟိန်ဒူနတျတို့ကို ကိုးကှယျသညျဟု လလေ့ာသိရှိရပါသညျ။ အနျောရထာမငျး လကျထကျတှငျ ထိုအယူကှဲဂိုဏျးမြားကို နှိပျကှပျပွီး စဈမှနျသညျ့ ထရေဝါဒ (မဟာယာနဂိုဏျးက ဟိနယာနဟု ချေါသညျ။) ဗုဒ်ဓဘာသာကို ကိုးကှယျရနျ ပြိုးထောငျပေးခဲ့သညျ။
သို့သျော သမိုငျးတဈလြောကျတှငျ မဟာယာန နှယျသော ပှဲကြောငျး အလအေ့ထမြား၊ ရိုးရာနတျနှငျ့ ဟိန်ဒူဆိုငျရာ အလအေ့ထမြားကို ညောငျရမျးခတျေအထိ တှရှေိ့ခဲ့ရသညျ။
သကျသအေားဖွငျ့ ကနျြစဈသားမငျး နနျးသဈ တညျပွီး နနျးသိမျးပှဲခံရာတှငျ ဟိန်ဒူနတျဖွဈသညျ့ ဗိဿနိုးနတျမြားကို ပသခွငျး တောငျငူနနျးဆကျတှငျလညျး တောငျတှငျးရှငျမုနျယိုဆရာတျော၊ ညောငျရမျးမငျးဆကျ၏ နောကျဆုံးမငျးဆကျမြားတှငျ ဗားမဲ့၊ ဗားမော့ အစရှိသညျ့ မှနျဆရာတျောမြားကို ပငျ့ဖိတျကာ နတျမေးစခွေငျး အစရှိသညျတို့ကို တှရေ့သညျ။
ယနေ့ မွနျမာစာပေ အရေးအသားမှာ ဗမာစာကို စံထားပွီး ရုံးသုံးစာအဖွဈ၊ မွနျမာစာအဖွဈ သတျမှတျသညျ ဟုဆိုနိုငျသညျ။ စာပေ အရေးအသားတှငျ ဗမာတို့သညျ အနှယျတူသော ပြူတို့ထံမှ မသငျယူခဲ့ပဲ ၊ မှနျတို့ကို ဆရာတငျခဲ့ပွီး အက်ခရာ အရေးအသားမှာလညျး မှနျတို့ထံမှ ရယူသညျ။
ထို့ကွောငျ့ မကျြမှောကျခတျေတှငျ ပြူကြောကျစာ အကွှငျးအကနျြမြားကို ဖတျရှုအဓိပ်ပာယျ ဖျောနိုငျရနျ ခကျခဲနရေသညျ။ ဗမာတို့သညျ ခရဈနှဈ ၁၁၁၃ မှ ၁၁၇၄ အတှငျး၌ မှနျယဉျကြေးမှုကို မှီငွမျးပွု၍ သီးခွား ယဉျကြေးမှု တညျထောငျရနျအားထုတျနဆေဲ ဖွဈကွောငျး ဒေါကျတာသနျးထှနျး၏ ခတျေဟောငျးမွနျမာ့ရာဇဝငျစာ-၂၅၌ တှရေ့သညျ။
ဗမာ့သမိုငျးဆရာတို့ကမူ ဗမာစာသညျ ပြူစာမှ ဆငျးသကျလာသညျဟု ယူဆကွသညျ။ ပြူစာမှ ဆငျးသကျရိုးမှနျလြှငျ ပြူ စာမှသညျ ဗမာစာဖွဈလာစရေနျ ခတျေအဆကျဆကျ ဆငျ့ကဲဆငျ့ကဲ ပွောငျးလဲလာခဲ့သော ကွားခံ စာပမြေိုး ရှိရမညျ။ ယငျးကဲ့သို့ မရှိခဲ့ကွောငျးကို ရာဇကုမာရျ ကြောကျစာက သကျသခေံလြှကျရှိသညျ။
ရာဇကုမာရျကြောကျစာ၌ ပါဠိ၊ ဗမာ၊ ပြူ၊ မှနျ ဟူ၍ စာပလေေးမြိုးဖွငျ့ တပွိုငျတညျး ရေးထိုးထားသညျကို တှရှေိ့နိုငျပါသညျ။ ယငျးကြောကျစာမှာအကွောငျးအရာ တဈခုတညျးကို စာပလေေးမြိုးဖွငျ့ တဈခတျေတညျးတှငျ ရေးထိုးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ဗမာစာသညျ ပြူစာမှ ဆငျးသကျလာသညျဟူသော အဆိုမှာ ခိုငျလုံသောအထောကျ အထားမဟုတျခြေ။
အလားတူစှာ မှနျစာမှ ဆငျးသကျလာသညျဟု ဆိုပွနျရနျလညျး ယငျးကြောကျစာမှာပငျ မှနျစာလညျး ပါရှိနပွေီး ဖွဈသောကွောငျးတညျး။ ယနထေိ့ ပြူကြောကျစာကို ကောငျးစှာ ရရေလေညျလညျ ဖတျတတျသူ ဟူ၍ မရှိသေးခြေ။
အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ပြူတို့သညျ ရခိုငျနှငျ့ မှနျတို့ကဲ့သို့ သီးခွားစာပဖွေငျ့ ရပျတညျနထေိုငျလာခဲ့သော လူမြိုးမြားဖွဈနသေောကွောငျ့တညျး။
ဒေါကျတာသနျးထှနျးက သူ၏ခတျေဟောငျး မွနျမာ့ရာဇဝငျ စာ-၁၂၂ တှငျ ထိုလေးရာစုတှငျ စာရေးနညျးပညာကို ပြူတို့ ရကွလြှကျ မှနျနှငျ့ ရခိုငျတို့က ၆ ရာစုတှငျ ရနပွေီးဖွဈလြှကျ နောငျအခါ ဗမာတို့က ပြူ၊ မှနျ နှဈဦးစလုံးထံမှ နညျးကို မှီလြှကျ ၁၁ ရာစုတှငျ ထိုပညာကို ရကွသညျဟု မှတျယူနိုငျ သညျဟူ၍ ကောကျခကျြခြ ရေးသားခဲ့ပါသညျ။
တဖနျ ပုဂံခတျေ၊ ပငျးယခတျေ၊ အငျးဝခတျေ ကြောကျစာမြားကို သသေခြောခြာ လလေ့ာကွညျ့ပါက “ရခိုငျသံဖွငျ့ ရေးသားထားသော ရခိုငျစာပေ အသုံးအနူနျးမြားကိုသာ ” တှရှေိ့ကွရပွနျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဗမာတို့သညျ ဗမာစာကို ပြူနှငျ့ မှနျတို့ထံမှ ရသညျဟူသော အဆိုကို စဉျးစားစရာ ဖွဈလာသညျ . ။
ရခိုငျ့အသံ နှငျ့ ပုဂံခတျေ ဗမာကြောကျစာကို နှိငျးယှဉျခွငျး
ရဟနျးသင်ျဃာ = ရဟနျးသံဃာ
မငျးဆွာ = မငျးဆရာ
ပငျ့သကူ = ပံသကူ
လှိယျ = လှေ
အရှလေ့ားသျော = အရှသှေ့ားသျော
ဗမာစာပေ တိုးတကျလာသော ပထမ အငျးဝခတျေ ကာလမှာလညျး မွနျမာပွညျအလယျပိုငျး ကို ရှမျးတို့ ကွီးစိုးထားခြိနျ ဖွဈသဖွငျ့ ဗမာစာတိုးတကျလာခွငျးသညျ ရှမျးတို့ရဲ့ ကြေးဇူးလညျး ပါဝငျသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဗမာစာသညျ ဗမာလူမြိူးတို့ရဲ့ စာပဟေု ဆိုခွငျးထကျ မွနျမာပွညျထောငျစုသား အားလုံးတို့ရဲ့အမြားပိုငျ ဘုံ စာပေ အရေးအသား ဟု ဆိုရပမေညျ။
မူရငျးရေးသားသူအား လေးစားစှာဖွငျ့ credit ပေးပါသညျ။
Posted in ဗဟုသုတ, သမိုင်းLeaveaComment on “ဗမာလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း”
ရေနံချောင်းမြို့ အထက( ၁) မှ ထူးခြားသော လူရည်ချွန် ညီအကိုအရင်း (၄) ဦး
ရေနံချောင်းမြို့ အထက( ၁)ကျောင်းတော်ကြီးမှ ထုးချွန်ထက်မြက့်ကြပြီး ထူးခြားသော လူရည်ချွန် ညီအစ်ကို အရင်း (၄) ဦး ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်…။
ထိုအထဲ…ဆရာတော် အရှင် ဆန္ဒာဓိက ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး သိထားသော ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ Continue reading “ရေနံချောင်းမြို့ အထက( ၁) မှ ထူးခြားသော လူရည်ချွန် ညီအကိုအရင်း (၄) ဦး”
Posted in ဗဟုသုတLeaveaComment on ရေနံချောင်းမြို့ အထက( ၁) မှ ထူးခြားသော လူရည်ချွန် ညီအကိုအရင်း (၄) ဦး
မြန်မာ မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာ နှင့် ဟောကိန်းများ
Posted on February 2, 2019 February 2, 2019 by moezaw
ဗေဒင်ပညာကိုစတင်ရင်းနှီးခွင့်ရသော အချိန်က၁၁ နှစ်သားအရွယ် ၅တန်းကျောင်းသားဘဝ။ဗေဒင်အချူ ပ် မဟာဘုတ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း မဟာဘုတ်ပညာကို စတင်သင်ခဲ့ရသည်။ အဲဒီကစလို့ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကိုတည် ၇နဲ့စားအကြွင်းကို ဘင်္ဂအိမ်ကနေစပြီး “အောင်လံထူစစ်သူကြီးပွဲ” လင်္ကာအတိုင်း မဟာဘုတ်တိုင်ထူရမှန်းသိခဲ့သည်။ကျောင်းသား ဘဝကစလို့သူငယ်ချင်းတွေကို မွေးသက္ကရာဇ်မေးပြီး ဘာဖွားဆိုတာ တွက်ပေးနေကြပင်။
ဒါပေမဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလဆိုတော့ မတွေးတတ် မစဉ်းစားတတ်သေးပေ။ “လှတောမြို့သား အကြွားဆင့် “ဆိုပြီး အိမ်ပိုင်ဂြိုဟ်တွေ သိပေမဲ့ အသုံးမချတတ်ပေ ။ ကျောင်းပညာပြီးဆုံးလို့ ဗေဒင်ပညာလိုက်စားခဲ့ပေမဲ့ မဟာဘုတ်ပညာကို မေ့ထားခဲ့မိတာတော့ ဝန်ခံရမည်သာ။ဒါပေမဲ့ မဟာဘုတ်ပညာဟာမေ့ထားလို့မရဘူးဆိုတာ အသက်အရွယ်ရလာမှ သိလာခဲ့သည်။ အမေကျော်ပြီး ဒွေးတော်လွမ်းခဲ့မိသည်။အခုမှမဟာဘုတ်ကို “က,ခ” စလို့ပြန်လေ့လာနရသည်။ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပညာရပ်ပင်။
မဟာဘုတ်ပညာကို လူအများကိုလဲသိစေချင်သည်။ ကိုယ်ကလဲ မဟာဘုတ်ပညာနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့က သူငယ်တန်းအဆင့်သာသာ။ ဒါပေမဲ့မဟာဘုတ်ပညာကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ချင်တာနဲ့ အကြွင်းဖွားအဟောတွေကို အကျဉ်းချုပ်လောက်ရေးပေးချင်မိသည်။ ဒါကလဲ ယေဘုယျသဘောတွေလောက်ပဲ ရေးလို့ရမယ်ဆိုတာသိသည်။
နေ့သားအလိုက်၊နာမည်အလိုက်၊ မဟာဘုတ်အကြွင်းအလိုက်အဟောတွေကအသေးစိပ်ကွဲပြားသွားမည်သာ။ အဖွားအဟောတွေ ရေးမည်ဆိုရင်တောင် တော်တော်များများက မိမိဖွားဇာတာကိုသိသူကနည်းသည်။
ပုတိ၊ ဘင်္ဂ၊ မရဏ
အထွန်း၊သိုက်၊ရာဇ၊အဓိပတိ ဆိုတာသိပေမဲ့ မိမိဘာဖွားဆိုတာတော့ သိသူနည်းကြသည်။ ဘယ်လိုတွက်ရမလဲမေးလိုက်ရင်ပိုဆိုးသွားတတ်သည်။တွက်နည်းရေးပြရရင်လဲကိုကစာအရေးမတတ်တာနဲ့ တော့ သိုက်စာဖတ်ရသလိုဖြစ်နေမှာလဲစိုးရသေးသည်။ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို ၇နဲ့စား ရလာတဲ့အကြွင်းကိုကြည့်ပြီး ဘာနေ့သားဆိုဘာဖွားလဲဆိုတာရေးပေးထားလိုက်သည်။ဥပမာ တွက်ပြရရင် မိမိဟာ ၁၃၅၀မွေးတယ်ဆိုပါတော့။ ၁၃၅၀ကို ၇နဲ့စားရင် ၆ကြွင်းတယ်(၁၃၅၀ ÷၇=၆ ) ၆ကြွင်းကို ကြည့်လိုက်ပေါ့။၆ခုကြွင်း တနင်္ဂနွေ ဖြစ်လျှင်သိုက်ဖွား၆ခုကြွင်း တနင်္လာ ဖြစ်လျှင် မရဏဖွားဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မိမိ၏ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည်၍ ၇ နှင့်စားပါ
၀ခုကြွင်း တနင်္ဂနွေ ဖြစ်လျှင် ပုတိဖွား
၀ခုကြွင်းတနင်္လာ ဖြစ်လျှင် သိုက်ဖွား
၀ခုကြွင်းအင်္ဂါ ဖြစ်လျှင် မရဏဖွား
၀ခုကြွင်းကြာသပတေး ဖြစ်လျှင် ရာဇဖွား
၀ခုကြွင်းသောကြာ ဖြစ်လျှင် အထွန်းဖွား
၀ခုကြွင်းစနေ ဖြစ်လျှင် ဘင်္ဂဖွား Continue reading “မြန်မာ မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာ နှင့် ဟောကိန်းများ”
Posted in ဗဟုသုတ, ဗေဒင်ကဏ္ဍLeaveaComment on မြန်မာ မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာ နှင့် ဟောကိန်းများ
မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီး တည်ဆောက်ခဲ့စဉ်က နှောင်းလူတို့ မသိခဲ့ကြသော ပြသနာများ
Posted on January 31, 2019 by moezaw
ပုထိုးတော်ကြီး တည်ထား ရာတွင် ဌာပနာတိုက် (၂၁) တိုက် ထည့်သွင်း ထားရှိခဲ့ပါသည်။ အလယ် ဌာပနာ တိုက်မကြီးကို ကြေးသလွဲမည်း အချိန် (၄၁၄၈၃၄) ဖြင့် စတုရန်း (၁၀) တောင်၊ အစောက် (၇) တောင် အထူ (၁) အရွယ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထား ခဲ့ပါသည်။ Continue reading “မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီး တည်ဆောက်ခဲ့စဉ်က နှောင်းလူတို့ မသိခဲ့ကြသော ပြသနာများ”
Posted in ဗဟုသုတ, သမိုင်းLeaveaComment on မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီး တည်ဆောက်ခဲ့စဉ်က နှောင်းလူတို့ မသိခဲ့ကြသော ပြသနာများ
မထင်မှတ်ပဲ သတို့သားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော် (သို့ ) ဆရာတော်၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
Zawgyi ဖြင့် ဖတ်ရန်
မိုင်းဖုန်း ဆရာတော် ဟာ ထူးခြားတဲ့ ပါရမီရှင် တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ မွေးဖွားစဉ်က မိုးတွေအဆက်မပြတ် ရွာသွန်း ဖြိုး ခဲ့တာကြောင့် အဖွားဖြစ်သူက ဘုန်းကံထူးတဲ့ ကလေးကို ရှမ်း ဘာသာအားဖြင့် “ပုခေ်းrဝုမ့်” အဆက်မပြတ် သော မိုးစက်ကဲ့သို့ ပုညကောင်းမှုရှိတဲ့သူဟု အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အသံဖလှယ်စနစ်ဖြင့် “ပ”ကို “မ”သို့ပြောင်း၊ “မ”မှ “ဝ”သို့ပြောင်းကာ ရှမ်းလို “ကျောက်ဝုမ်းစုမ့်”ဟု ခေါ်တွင် Continue reading “မထင်မှတ်ပဲ သတို့သားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော် (သို့ ) ဆရာတော်၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း”
Posted in ဗဟုသုတ, ဘာသာရေးLeaveaComment on မထင်မှတ်ပဲ သတို့သားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော် (သို့ ) ဆရာတော်၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
အင်္ဂလိပ်တွေဟာ မြန်မာနိူင်ငံကို သိမ်းပိုက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ ကို အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ မြို့ အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ မြို့ တော် ကိုစနစ်တစ်ကျ မြို့ပြအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့အညီတည် ဆောက်ခဲ့ကြ တယ်။
ပြင်သစ် ကုမ္ပဏီ တွေကိုကန်ထရိုက်ပေးပြီးမြေအောက် ရေဆိုး ထုတ် ဥမင် ကွန်ယက် စနစ်တွေကို အင်္ဂလန်အတိုင်း တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီ မြေအောက် ဥမင် ကွန်ယက် စနစ်ကြီးကို ရန်ကုန် မြို့တစ်မြို့ လုံးဖြန့်ကျက် ထားနိူင်ခဲ့ကြတယ် ။ Continue reading “ရန်ကုန်မြို့  မြေအောက်မှ မဟာလျှို့ ဝှက်ချက်များ”
Posted in ဗဟုသုတ, သမိုင်းLeaveaComment on ရန်ကုန်မြို့  မြေအောက်မှ မဟာလျှို့ ဝှက်ချက်များ
ရာဇဓိရာဇ်လို့ ဆိုလိုက်ရင် အင်းဝဘုရင်မင်းခေါင်နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်ပွဲတွေဆင်နွဲခဲ့သူအဖြစ်သိကြမှာပါ။ အင်းဝ နဲ့ ဟံသာဝတီ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကို အနှစ် ၄၀ စစ်ပွဲလို့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အနှစ် ၄၀ လို့ခေါ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းက ၃၆ နှစ်ပါ။ အများဆုံးတိုက်ခဲ့ကြတာတော့ အင်းဝဘုရင်မင်းခေါင် နဲ့ ဟံသာဝတီဘုရင်ရာဇာဓိရာဇ် Continue reading “အင်းဝ – ဟံသာဝတီ အနှစ် ၄၀ စစ်ပွဲ”
Posted in ဗဟုသုတ, သမိုင်းLeaveaComment on အင်းဝ – ဟံသာဝတီ အနှစ် ၄၀ စစ်ပွဲ
သူတော်ကောင်း အစားစားတွေထဲမှာ အားကျကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်အဖြစ်ဆုံး၊ အတူယူမြတ်နိုးဖို့အသင့်တော်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ရွေးချယ်ပြပါ ဆိုလျှင် အရှင်ဗာကုလမထေရ်ကို ညွန်းဆိုမိမှာပါ။ အရှင်ဗာကုလမထေရ်ဟာ ကူးခတ်လွန်မြောက်ဖို့ ခက်ခဲလှတဲ့ဘ၀သံသရာ ပင်လယ်ခရီးကြမ်းကို ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ မာလိန်မှူး တစ်ဦးလို သက်သောင့်သက်သာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ကူးဖြတ်ပြခဲ့သလို အစိုးမရတဲ့ လူ့ဘ၀ကိုလည်း အစိုးရတဲ့ နတ်ဒေ၀တာတစ်ဦးလို နေပြသွား တော်မူခဲ့ Continue reading “ဗုဒ္ဓသာသနာထဲက အနာရောဂါကင်းရှင်းစွာနဲ့ အသက် ၁၆၀တိုင် နေသွားခဲ့သူ အရှင်ဗာကုလ”
Posted in ဗဟုသုတ, ဘာသာရေးLeaveaComment on ဗုဒ္ဓသာသနာထဲက အနာရောဂါကင်းရှင်းစွာနဲ့ အသက် ၁၆၀တိုင် နေသွားခဲ့သူ အရှင်ဗာကုလ
ရည်းစားမမြဲတဲ့ သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီ9views
ဝန်ထမ်းတွေ အားပါးတရ ငိုကြရမယ့် ၂၀၁၉ ရုံးပိတ်ရက် ပြက္ခဒိန်7views
2018မကုန်​ခင်​​လေးမှာ ရိုက်​ကူးခဲ့တဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့အသည်းယားဖွယ်​ ​ကြော်​ငြာဗီဒီယို​တွေ6views
ယောက်ျားလေးအချင်းချင်း ရည်းစားစကား အပြောခံရဖူးတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကောင်းမြတ်စံ4views
မထင်မှတ်ပဲ သတို့သားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော် (သို့ ) ဆရာတော်၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း4views
ကောက်ကြောင်းအလှကြောင့် ပုရိသတွေကြား နာမည်ကြီးတဲ့ ဆယ်လီမမများ4views
မြန်မာ မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာ နှင့် ဟောကိန်းများ4views
အွန်လိုင်းပေါ် ပျံ့နေတဲ့ HD ကိစ္စ သင်းသင်းဖြေပြီ3views
“ဗမာလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း”3views